အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မိသွားကြတဲ့အခါ ဘာတွေကြုံရမလဲ? ဖတ်ကြည့် – သတင်းစုံ
အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မိသွားကြတဲ့အခါ ဘာတွေကြုံရမလဲ? ဖတ်ကြည့်
blissful-burnell Lifestyle 0
သူနဲ့ မခေါ်မပြောဘဲ နေနေရတဲ့ နာကျင်မှုက သူ့ကိုစိတ်ဆိုးရတာထက် ပိုခါးသီးလို့ မခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားက သူ့ကို တစ်သက်လုံး ပြောဖြစ်မှာ မဟုတ်တဲ့စကားပါ
လက်ထပ်ဖို့ မစဉ်းစားခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးရမယ့် မေးခွန်းက သူ့ကို တကယ်ချစ်တာ သေချာပြီလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ဘဝတစ်ခုက အမြဲတစေ အဆင်ပြေ ချောမွေ့မနေနိုင်ပါဘူး။
ဘဝနှစ်ခုပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာလည်း ပိုများတဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ ၊ အခက်အခဲတွေကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောကဓံကို ကျော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာတော့ အချစ်စစ်က အကောင်းဆုံး အင်အားဖြစ်ပါတယ်
ဒီတော့ ကိုယ့်ရင်ထဲက အချစ်ကတကယ်စစ်ရဲ့လား ကိုယ်ရထားတဲ့ အချစ်တွေကရော အစစ်ဆိုတာသေချာပြီလားလို့ ဆန်းစစ်ပြီး မှ လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်သင့်တာပေါ့။
ဘဝအတွက် အမှန်ကန်ဆုံး ချမိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်တယ်လို့ ဂုဏ်ယူလို့ရအောင် အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးများလဲလို့ Marry နဲ့ အတူတူ ရှာဖွေကြည့်ရအောင်လားနော်
တကယ်တော့ အချစ်စစ်ဆိုတဲ့ အရာဟာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရတာ သိပ်ကိုချိုမြိန်လွန်းပေမယ့် ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကတော့ ခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ အချစ်ချစ်နဲ့ ချစ်ရမယ့် သူမျိုးကိုလည်း တစ်သက်မှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထက် ပိုပြီး တွေ့ဖို့ မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။
ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်စစ်ကို တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဟာ အချစ်စစ်ကို တွေ့နေမှန်း သေသေချာချာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ အချစ်တွေကို ဘယ်လို ခြေရာကောက်ကြမလဲ။
မပူပါနဲ့ လူတိုင်းဟာ အချစ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ အလိုလို ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့ချိန်မှာ ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှုတွေ ကြုံရမလဲဆိုတာ Marry က ပြောပြပေးပါမယ်။
သူ့အတွက် ဂရုစိုက်ပေးနေတာ၊ နားလည်မှုပေးနေတာ၊ ဖြည့်ဆည်းပေးနေမိတာတွေက သူ့ဆီက တစ်စုံတစ်ရာပြန်ရပါစေတော့ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မပါဘူးဆိုရင် ဒါဟာ အချစ်စစ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
သူ့ကို အဲ့လို ပေးဆပ်ပေးဖို့ အထူးတလည် စဉ်းစားမိတာ၊ လုပ်ယူထားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အလိုအလျောက် ပြုမှုမိနေတာမျိုးပါ။
တစ်စုံတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရမှ၊ စိတ်ကျေနပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာရလိုက်မှ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ပျော်နေ၊ ပြုံးနေ၊ ရယ်နေ၊ စိတ်ကျေနပ်နေတာကို မြင်လိုက်ရရုံနဲ့ ကိုယ်ကပါ အလိုလိုပျော်ရွှင်လာတာမျိုးဆိုရင် ရင်ထဲမှာ အချစ်စစ်တွေ ကိန်းအောင်းနေတာ သေချာနေပါပြီ။
အချိန်ကြာကြာ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လို့ မရတာတွေ……
သူ့လုပ်ရပ် အပြုအမူတွေကို သင်အရမ်း စိတ်ဆိုးနာကျင်ခဲ့ရင်တောင်မှ အဲ့ဒါက အချိန်ခဏတာပဲတဲ့။ သူနဲ့ မခေါ်မပြောဘဲ နေနေရတဲ့ နာကျင်မှုက သူ့ကိုစိတ်ဆိုးရတာထက် ပိုခါးသီးလို့ မခေါ်မပြောဘဲလည်း ကြာကြာမနေနိုင်ကြပါဘူးတဲ့။ မခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားက သူ့ကို တစ်သက်လုံး ပြောဖြစ်မှာ မဟုတ်တဲ့စကားပါ။
သူနဲ့ မချေါမပွောဘဲ နနေရေတဲ့ နာကငျြမှုက သူ့ကိုစိတျဆိုးရတာထကျ ပိုခါးသီးလို့ မခှငျ့လှတျနိုငျဘူးဆိုတဲ့ စကားက သူ့ကို တဈသကျလုံး ပွောဖွဈမှာ မဟုတျတဲ့စကားပါ
လကျထပျဖို့ မစဉျးစားခငျ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးရမယျ့ မေးခှနျးက သူ့ကို တကယျခဈြတာ သခြောပွီလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးပါ။ ဘဝတဈခုက အမွဲတစေ အဆငျပွေ ခြောမှမေ့နနေိုငျပါဘူး။
ဘဝနှဈခုပေါငျးစပျတဲ့အခါမှာလညျး ပိုမြားတဲ့ အဆငျမပွမှေုတှေ ၊ အခကျအခဲတှကေို တှရေ့နိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လောကဓံကို ကြျောဖွတျတဲ့အခါမှာတော့ အခဈြစဈက အကောငျးဆုံး အငျအားဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ ကိုယျ့ရငျထဲက အခဈြကတကယျစဈရဲ့လား ကိုယျရထားတဲ့ အခဈြတှကေရော အစဈဆိုတာသခြောပွီလားလို့ ဆနျးစဈပွီး မှ လကျထပျဖို့ ဆုံးဖွတျသငျ့တာပေါ့။
ဘဝအတှကျ အမှနျကနျဆုံး ခမြိတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြက လကျထပျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ဖွဈတယျလို့ ဂုဏျယူလို့ရအောငျ အခဈြစဈဆိုတာ ဘယျလိုမြိုးမြားလဲလို့ Marry နဲ့ အတူတူ ရှာဖှကွေညျ့ရအောငျလားနျော
တကယျတော့ အခဈြစဈဆိုတဲ့ အရာဟာ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုရတာ သိပျကိုခြိုမွိနျလှနျးပမေယျ့ ရှာဖှတှေရှေိ့ဖို့ကတော့ ခကျခဲလှနျးပါတယျ။ အခဈြခဈြနဲ့ ခဈြရမယျ့ သူမြိုးကိုလညျး တဈသကျမှာ တဈဦးတဈယောကျထကျ ပိုပွီး တှဖေို့ မလှယျကူနိုငျပါဘူး။
ဒီတော့ ကိုယျ့ရဲ့ အခဈြစဈကို တှတေဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျဟာ အခဈြစဈကို တှနေ့မှေနျး သသေခြောခြာ သိဖို့လိုပါတယျ။ ဒီတော့ အခဈြတှကေို ဘယျလို ခွရောကောကျကွမလဲ
။ မပူပါနဲ့ လူတိုငျးဟာ အခဈြနဲ့တှတေဲ့အခါမှာ အလိုလို ပွောငျးလဲသှားတာမြိုးတှရှေိပါတယျ။ ဒီတော့ အခဈြစဈနဲ့ တှခြေိ့နျမှာ ဘယျလို ပွောငျးလဲမှုတှေ ကွုံရမလဲဆိုတာ Marry က ပွောပွပေးပါမယျ
သူ့အတှကျ ဂရုစိုကျပေးနတော၊ နားလညျမှုပေးနတော၊ ဖွညျ့ဆညျးပေးနမေိတာတှကေ သူ့ဆီက တဈစုံတဈရာပွနျရပါစတေော့ ဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြမပါဘူးဆိုရငျ ဒါဟာ အခဈြစဈဆိုတာ သခြောပါတယျ။ သူ့ကို အဲ့လို ပေးဆပျပေးဖို့ အထူးတလညျ စဉျးစားမိတာ၊
လုပျယူထားတာမြိုး မဟုတျဘဲ အလိုအလြောကျ ပွုမှုမိနတောမြိုးပါ။
တဈစုံတဈခုကို ပိုငျဆိုငျလိုကျရမှ၊ စိတျကနြေပျမှု တဈစုံတဈရာရလိုကျမှ ပြျောရှငျမှုကို ခံစားရတာ မဟုတျဘဲ ကိုယျခဈြရတဲ့သူ ပြျောနေ၊ ပွုံးနေ၊ ရယျနေ၊ စိတျကနြေပျနတောကို မွငျလိုကျရရုံနဲ့ ကိုယျကပါ အလိုလိုပြျောရှငျလာတာမြိုးဆိုရငျ ရငျထဲမှာ အခဈြစဈတှေ ကိနျးအောငျးနတော သခြောနပေါပွီ
အခြိနျကွာကွာ စိတျဆိုးဒေါသထှကျလို့ မရတာတှေ
သူ့လုပျရပျ အပွုအမူတှကေို သငျအရမျး စိတျဆိုးနာကငျြခဲ့ရငျတောငျမှ အဲ့ဒါက အခြိနျခဏတာပဲတဲ့။
သူနဲ့ မချေါမပွောဘဲ နနေရေတဲ့ နာကငျြမှုက သူ့ကိုစိတျဆိုးရတာထကျ ပိုခါးသီးလို့ မချေါမပွောဘဲလညျး ကွာကွာမနနေိုငျကွပါဘူးတဲ့။ မခှငျ့လှတျနိုငျဘူးဆိုတဲ့ စကားက သူ့ကို တဈသကျလုံး ပွောဖွဈမှာ မဟုတျတဲ့စကားပါ။
ဆံပင်အစို နှင့်် အိပ်စက်တတ်သူများ အတွက် သတိပြုဖွယ်
ရာသီခွင်အလိုက် စိတ်နေစိတ်ထား နှင့် ထူးခြားချက်များ